राज्यले दार्जिलिङलाई आफ्नै ठान्छ, मिथिलालाई पराइ - Ratopati
| रमेश रञ्जन, प्राज्ञ, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान
स्वार्थवश मधेसबाट भागेका पहाडियाले मधेसप्रति घृणा फैलाएका हुन् । मधेस आन्दोलनपछि आफ्नो वर्चश्व समाप्त हुने देखेपछि कतिपय पहाडिया मधेसबाट भागे । उनीहरूले मधेसबारे नकारात्मक हल्ला फैलाए ।
मैले व्यक्तिप्रति अनादर व्यक्त गरेको होइन । तर केही नाम लिन्छु । जस्तो कि, राज्यले दार्जिलिङका अम्बर गुरुङ, इन्द्रबहादुर राई, पारिजातचाहिं सम्मानित नेपाली संगीतकार र साहित्यकार मान्यो । तर मैथिली भाषामा काम गर्ने कसलाई स्वीकार ग¥यो ? राज्यले नै एउटा समुदायको भाषामा लेख्नेलाई चाहिं सम्मानित गर्ने र अरू समुदायको भाषामा लेख्नेलाई वास्ता नगर्ने गर्न मिल्छ ? विभेद यसरी देखिन्छ । यो मनोविज्ञानले धेरै बुद्धिजीबीको दिमागमा घर गरेको छ ।
राज्यले खस नेपाली भाषाको सेवा गर्ने भारतीयलाई पनि नेपाली नै ठान्छ, सम्मान गर्छ । गोपाल योञ्जन, वैरागी काइँला, पारिजातलाई सम्मान गरेको छ । तर मैथिली बोल्ने नेपालीलाई पनि भारतीय ठान्छ ।
गायक हिरण्य भोजपुरेले मसँग भन्नुभएको थियो, ‘मधेसी जति राष्ट्रवादी अरू कोही भेटिनँ ।’ त्यो सही कुरा हो । राज्य र शासकले यो कुरा नबुझेजस्तो गरिरहेका छन् । तर जनता भने यो आन्दोलनलाई ‘वार कि पार’को सोचेर आफ्नो जीवनशैली बनाइसकेका छन् ।